Fanaovana taratasy hosoka : Mpiasan’ny minisiteran’ny Vola roa nadoboka am-ponja -
AccueilRaharaham-pirenenaFanaovana taratasy hosoka : Mpiasan’ny minisiteran’ny Vola roa nadoboka am-ponja
14/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Roalahy, mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola no nadoboka eny Antanimora, noho ny fanaovana taratasim-panjakana hosoka sy fanondranana olona an-tsokosoko any Kowety. Nikasa handefa vehivavy miisa roa any amin’io firenena Arabo io ireto farany, izao tra-tehaka izao. Fampiasana tombokasem-panjakana hosoka, izay an’ny FOP sy ny minisitera no nanaovan’izy ireo izany. Raha mpiasam-panjakana mantsy no maka pasipaoro dia mangataka fahazoan-dalana eny amin’ny FOP, fa tsy mahazo mivoaka amin’izao fotsiny. Mba ahamora ny fandefasana ireto roa vavy ireto dia nampiasain’ireto roalahy mpiasa eny anivon’ny minisiteran’ny Fananam-bola ireto, ireo fitaovam-panjakana hosoka ireo. Ny 11 Aprily lasa teo dia tonga nanamboatra pasipaoro tao amin’ny sampandraharaha misahana izany, teny Anosy ireo roa vavy ireo. Nampiahiahy ny tompon’andraikitra mpandray an-tanana ity raharaha ity ny taratasy nentin’izy roa ireo, ka nalefa avy hatrany tao amin’ny sampandraharaha manadihady momba ny resaka hosoka. Voaporofo teo noho eo ihany fa tsy izy, ary tsy ara-dalàna ny taratasy fahazoan-dalana hivoaka eto an-toerana, teny amin’ireto farany. Rehefa natao ny adina am-bava azy roa vavy ireto dia nilaza izy ireo fa handeha ho any Kowety. Izy roa vavy ireo indray no nahafahana nisambotra ireto roalahy mpiasam-panjakana ireto avy eo.
Natao ny fisavana ny trano, ka teny amin’ny toeram-ponenan’ny iray tamin’izy roalahy ireo, teny Tsaralalàna no tratra ireo tombokasem-panjakana hosoka , niaraka tamin’ny antontan-taratasy maromaro. Ny famotorana natao azy ireo dia nilaza ireto farany fa miara-miasa amin’ilay “agence” mpandray mpiasa any amin’ireo tany arabo ireo. Amin’izany dia ampandoaviny vola valo hetsy isan’olona ireo vehivavy alefa any. Io “agence” io no mandoa ny saran-dalan’ireo olona andeha hiasa any amin’izy ireo. Anisan’ny antony hanaovan’ireto mpiasan’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola ireto izao asa ratsy izao ny fahazoan’izy ireo vola mitentina telo tapitrisa Ariary isan’olona avy amin’io “ agence” mpitady sy mpanafatra mpiasa io. Raha ny fantatra ihany dia tao anatin’ny tambazotran-tserasera “facebook” no nahitan’izy roalahy ity resaka fanondranana mpiasa an-tsokosoko any amin’ny tany arabo ity. Voararan’ny fanjakana malagasy tanteraka ny fandefasana mpiasa any amin’ireo tany arabo, toa an’i Liban, Kowety ary Arabia Saodita, noho ireo herisetra maro samihafa mihatra amin’ireo vehivavy malagasy tonga mitady ravinahitra any an-toerana ireo. Mba ahafahana mampihatra ny lalàna dia nisy ny fepetra noraisina. Ohatra amin’izany ny fananan’ny vehivavy hivoaka eto Madagasikara taratasy fampiantranoana sy dika mitovy amin’ny kara-panondron’ilay olona hivantanany manamarina fa ho any amin’ilay firenena voalaza tokoa izy. Niara-natolotra ny fampanoavana omaly moa izy efatra ireto ka nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora ireo roalahy mpiasam-panjakana ireo, raha toa kosa nahazo fahafahana vonjimaika izy roa vavy .